Aogositra 17, 2018 Admin
Binance & LCX crypto-Fiat mamorona sehatra fifanakalozana ao Liechtenstein
Liechtenstein Cryptoassets Exchange dia miara-miasa amin'ny Binance mba hanomboka ny crypto-Fiat sehatra fifanakalozana ao Liechtenstein. Ny sehatra voalohany dia hanolotra ny varotra eo Soisa ariary sy Euros an'i Bitcoin, nampiany more tsiroaroa hamoaka fitsipika fankatoavana.
Za-draharaha avy any Binance ekipa dia miisa ny sehatra & ho tompon'andraikitra amin'ny fikojakojana ny sehatra. Ny ekipa LCX dia manome fanohanana ny asa takiana anisan'izany ny mpanjifa fanohanana, ara-dalàna ilaina, KYC sy AML. ny PDG & Mpanorina ny Binance, Changpeng hoy Zhao: "Mino aho fa hamorona Binance LCX maharitra sy azo antoka Fiat-crypto vavahady ho an'ny matihanina sy ny mpampiasa vola tsy tapaka mitovy. Manantena aho fa handroaka Binance LCX fitsipika vaovao ho an'ny ny fiasa sy ny fankatoavana ny blockchain orinasa. "
Coinbase antontan-taratasy fanamarinana ny rafitra fandoavam-bola azo antoka Bitcoin
A vao nivoaka Coinbase patanty manoritra ny fomba fanaovana Bitcoin fividianana azo antoka kokoa ho an'ny mpanjifa, fandoavam-bola mampiasa ny vavahadin-tserasera izay mety hamela ireo mpampiasa handoa mampiasa Bitcoin nomerika mivantana avy amin'ny kitapom-batsy. “Mety ho fiarovana fiahiana ny mpampiasa fa ny tsy miankina fanalahidin 'ny Bitcoin adiresy mety ho nangalarina amin'ny mpanjifany,” ny fanamarinana voalaza. “Rafitra misy tsy manome vahaolana ho an'ny tsy miankina foana fiarovana ny fanalahidy raha mbola mamela ny mpampiasa mba Checkout amin'ny mpivarotra pejy sy ny fanaovana fandoavam-bola mampiasa mpanjifany.”
Ny rafitra mametraka ny iray “key lanonana” manan-danja izay mahatonga mizara izay natambatra ho any an-miasa manan-danja tompony - voaaro ny mpampiasa’ passphrases - izay afaka ho hita sy voafafa ampahibemaso aorian'ny fampiasana. Ny tompony miasa manan-danja ampiasaina amin'ny tsy miankina no manan-danja nandritra ny checkout encryption, ary koa ny raharaham-barotra fanaovan-tsonia rehefa misy fandoavam-bola natao.
Kraken Daily Market Report for 16.08.2018
$124M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
TSY & ProximaX with Lon Wo...
Previous Post:Blockchain News 16.08.2018
Next Post:Blockchain News 20.08.2018
Kes hoy i:
Novambra 3, 2018 amin'ny 1:27 PM